သင် သူမရဲ့ ပန်းဖူးလေးကို လုပ်ပေးသင့်တဲ့ အရာ ၁၃ ခု – Gentleman Magazine
သင်ကိုယ့်သင်တော့ ဘာဂျာစကေး မြင့်လှပြီ ထင်နေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် မိန်းမတွေရဲ့ ၇၅ ရာနှုန်းကပဲ ဘာဂျာကနေ ပြီးဆုံးခြင်း ရောက်ဖူးတယ် ဆိုကြပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်း ၁၃ ခုကို အသုံးပြုပြီး ခုညပဲ သူမကို Surprise လုပ်လိုက်ပါ။
၁. စုပ်ပြီး ဖိညှပ်ပေးပါ
သင့်ရဲ့ လျှာတစ်ခုထဲနဲ့ လျက်တာထက်စာရင် လျှာနဲ့ နှုတ်ခမ်း ပေါင်း သုံးခြင်းက ပိုထိရောက်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ပန်းဖူးလေး ထိပ်လေးကို စုပ်ပေးပြီး ပန်းပွင့်လွှာတွေကို နှုတ်ခမ်းနဲ့ ဖိညှပ်ပေးခြင်းက အဲဒီ ပါတ်ဝန်းကျင်က နာဗ်ကြောတွေကို အကျိုး သက်ရောက်စေပါတယ်။ သွေးစီးဆင်းမှုကိုလဲ ပိုအားကောင်းစေပါတယ်။
သင်က ကျောက်ရုပ်တစ်ရုပ်လို နေပြီး သူမကို လှုပ်ရှားမှု လုပ်ခိုင်းပါ။ သင့်ရဲ့ သွားနဲ့ သွားဖုံးနဲ့ကို သူမရဲ့ ပန်းဖူးလေးနဲ့ ဖိထားပြီး ငြိမ်ငြိမ်လေးနေကာ သူမကို စိတ်ကြိုက် လှုပ်ရှားခိုင်းပါ။ သူမ သင့်မျက်နှာပေါ်မှာ ထိုင်ရတာ ကြိုက်ရင် ဒီပုံစံက အရမ်း အဆင်ပြေပါတယ်။
သူမရဲ့ ပန်းလေးကို ကင်းဗတ်စ လို၊ သင့်လျှာကို စုတ်တံလို သဘောထားပြီး A ကနေ Z အထိ စိတ်ကြိုင် ရေးကြည့်ပါ။ ဒီနည်းလမ်းလေးက ပျော်စရာကောင်းပြီး အကျိုး အရမ်း ရှိပါတယ်။
၄. ခြံစည်းရိုးတွေကို ဆေးသုတ်ပြီး ကားရေသုတ်တံတွေလို ပြုမူပါ
သင့်ရဲ့ နွေးထွေးတဲ့ ထွက်လေနဲ့ သူမပန်းလေးကို အရင် မှုတ်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ ပန်းဖူးလေးကို ခြံစည်းရိုးဆေးသုတ်သလို အပေါ်အောက် ဆွဲပေးပါ။ ပြီးရင် ကားရေသုတ်တံတွေလို ဘယ်ညာ ယမ်းပေးပါ။
၅. အောက်ပိုင်းကို မမေ့ပါနဲ့
လူတော်တော်များများက ပန်းဖူးလေး ထိပ်ပိုင်းလေးကိုပဲ ဂရုစိုက်တတ်ကြပေမယ့် တကယ်တော့ ပန်းဖူးလေးဟာ လေးလက်မလောက် ရှည်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ လက်ချောင်းတွေနဲ့ ပန်းဖူးလေး အောက်ပိုင်း ကို ရှေ့နောက်၊ ဘေးတိုက်၊ ခန့်မှန်းလို့ မရလောက်တဲ့ထိ ပွတ်ပေးခြင်းဟာ သူမကို ကောင်းကောင်းခံစားရစေပြီး ပြီးခါနီးကျရင် ပုံမှန် သွင်းထုတ် လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
၆. ဘာဂျာ မှုတ်ပါ
သင့်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို ဘာဂျာမှုတ်သလို ဝလုံးပုံ ဝိုင်းလိုက်ပြီး သူမရဲ့ ပန်းဖူးလေးကို ပါးစပ်ထဲ ထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးတော့ ဘာဂျာမှုတ်သလို အသံလေးတွေ ပေးရင်း စုပ်ပေးပါ။
သင့် ဘောတွေကို အုပ်ကိုင်ထားတာ ကြိုက်ပါသလား?? အဲလိုပဲ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ သူမပန်းပွင့် တစ်ခုလုံးကို အုပ်ကိုင်ပြီး ပန်းဖူးလေးကို ဖိအားနည်းနည် ပိုပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် စည်းချက်မှန်မှန် နှိပ်နယ်ပေးပါတော့။
ပန်းထုတ်တာကို ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မိန်းမတော်တော်များများက အာသာဖြေဖျောက်ရင် ရေချိုးခန်းကို ပိုကြိုက်တာ သင် သိပါသလား။ ရေပန်းတစ်ခုကို ကိုင်ပြီး သူမရဲ့ အောက်ပိုင်း ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးကို ဖျန်းပက်ပေးနေပါ။ ပြီးတော့ သူမရဲ့ ပန်းဖူးလေးနားကို ကပ်လိုက်၊ ခွာလိုက် လုပ်ပေးပါ။
၉. လိင်တံဖြင့် နှိပ်နယ်ခြင်း
သင်တို့နှစ်ယောက် မျက်နှာခြင်းဆိုင် ဘေးစောင်း လှဲနေပါ။ ပြီးတော့ သင့်ရဲ့ လိင်တံကို ကိုင်ပြီး သူမရဲ့ ပန်းဖူးလေးကို လိင်တံထိပ်နဲ့ နှိပ်နယ်ပေးပါ။ သူမကို ကိုင်ခိုင်းပြီး စိတ်ကြိုက် နှိပ်ခိုင်းလို့လဲ ရပါတယ်။
၁၀. နှုတ်ခမ်း ဝန်ဆောင်မှု
သူမရဲ့ အတွင်းပိုင်း ပွင့်ချပ်လွှာတွေကို စုပ်ပေးခြင်းဟာ ပန်းဖူးလေး အရမ်း sensitive ဖြစ်လွန်းတဲ့ ကောင်မလေးတွေကို အဆင်ပြေစေပါတယ်။ နာဗ်ကြော ၈ထောင် ရှိတဲ့ ပန်းဖူးလေးကို တိုက်ရိုက်ထိတာ တချို့ မိန်းမတွေအတွက် များလွန်းပါတယ်။
၁၁. ကမ္ဘာနဲ့ ချီရအောင်
We-Vibe4Plus ဆိုတဲ့ Vibrator က U ပုံစံ ရှိပြီး အစွန်းတစ်ဖက်က ပန်းဖူးလေး၊ တစ်ဖက်က G Spot ကို ထိစေပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံစဉ်မှာတောင် ဝတ်ထားနိုင်ပြီး Mobile App ကို သုံးရင် ဟိုဘက်ကမ္ဘာခြမ်းကနေပြီးတောင် သူမကို သင် လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။
၁၂. Vibrator ရှည်များ
ကြည့်ရတာ ကြောက်ဖို့ကောင်းပေမယ့် လိင်ဆက်ဆံစဉ် Vibrator တစ်ခု ယူလာတာ သင်တို့ နှစ်ယောင်လုံးအတွက် ပိုကောင်းစေပါတယ်။ သင်က ဆက်ဆံစဉ် သင့်တာဝန်ကို ကျေအောင် လုပ်နိုင်ပြီး သူမက ပန်းဖူးလေးကို စိတ်ကြိုက် လှုံ့ဆွနိုင်ပါတယ်။
သူမ ပန်းဖူးလေးကို ပူပြီး ယားလာစေဖို့ ထုတ်ထားတဲ့ ဆီတွေ ရှိပါတယ်။ Love Button arousal balm, Zestra, ON natural arousal oil for her တို့ဟာ နာမည်ကြီးပါတယ်။ သုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဖြည်းဖြည်းခြင်းစီ သုံးကြည့်ပါ။ တချို့မိန်းမတွေက အရမ်း Sensitive ဖြစ်လွန်းပါတယ်။
သငျ သူမရဲ့ ပနျးဖူးလေးကို လုပျပေးသငျ့တဲ့ အရာ ၁၃ ခု
သငျကိုယျ့သငျတော့ ဘာဂြာစကေး မွငျ့လှပွီ ထငျနမှောပါ။ ဒါပမေယျ့ မိနျးမတှရေဲ့ ၇၅ ရာနှုနျးကပဲ ဘာဂြာကနေ ပွီးဆုံးခွငျး ရောကျဖူးတယျ ဆိုကွပါတယျ။ ဒီနညျးလမျး ၁၃ ခုကို အသုံးပွုပွီး ခုညပဲ သူမကို Surprise လုပျလိုကျပါ။
၁. စုပျပွီး ဖိညှပျပေးပါ
သငျ့ရဲ့ လြှာတဈခုထဲနဲ့ လကျြတာထကျစာရငျ လြှာနဲ့ နှုတျခမျး ပေါငျး သုံးခွငျးက ပိုထိရောကျပါတယျ။ သူမရဲ့ ပနျးဖူးလေး ထိပျလေးကို စုပျပေးပွီး ပနျးပှငျ့လှာတှကေို နှုတျခမျးနဲ့ ဖိညှပျပေးခွငျးက အဲဒီ ပါတျဝနျးကငျြက နာဗျကွောတှကေို အကြိုး သကျရောကျစပေါတယျ။ သှေးစီးဆငျးမှုကိုလဲ ပိုအားကောငျးစပေါတယျ။
သငျက ကြောကျရုပျတဈရုပျလို နပွေီး သူမကို လှုပျရှားမှု လုပျခိုငျးပါ။ သငျ့ရဲ့ သှားနဲ့ သှားဖုံးနဲ့ကို သူမရဲ့ ပနျးဖူးလေးနဲ့ ဖိထားပွီး ငွိမျငွိမျလေးနကော သူမကို စိတျကွိုကျ လှုပျရှားခိုငျးပါ။ သူမ သငျ့မကျြနှာပျေါမှာ ထိုငျရတာ ကွိုကျရငျ ဒီပုံစံက အရမျး အဆငျပွပေါတယျ။
သူမရဲ့ ပနျးလေးကို ကငျးဗတျစ လို၊ သငျ့လြှာကို စုတျတံလို သဘောထားပွီး A ကနေ Z အထိ စိတျကွိုငျ ရေးကွညျ့ပါ။ ဒီနညျးလမျးလေးက ပြျောစရာကောငျးပွီး အကြိုး အရမျး ရှိပါတယျ။
၄. ခွံစညျးရိုးတှကေို ဆေးသုတျပွီး ကားရသေုတျတံတှလေို ပွုမူပါ
သငျ့ရဲ့ နှေးထှေးတဲ့ ထှကျလနေဲ့ သူမပနျးလေးကို အရငျ မှုတျပေးလိုကျပါ။ ပွီးတော့ ပနျးဖူးလေးကို ခွံစညျးရိုးဆေးသုတျသလို အပျေါအောကျ ဆှဲပေးပါ။ ပွီးရငျ ကားရသေုတျတံတှလေို ဘယျညာ ယမျးပေးပါ။
၅. အောကျပိုငျးကို မမပေ့ါနဲ့
လူတျောတျောမြားမြားက ပနျးဖူးလေး ထိပျပိုငျးလေးကိုပဲ ဂရုစိုကျတတျကွပမေယျ့ တကယျတော့ ပနျးဖူးလေးဟာ လေးလကျမလောကျ ရှညျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ လကျခြောငျးတှနေဲ့ ပနျးဖူးလေး အောကျပိုငျး ကို ရှနေ့ောကျ၊ ဘေးတိုကျ၊ ခနျ့မှနျးလို့ မရလောကျတဲ့ထိ ပှတျပေးခွငျးဟာ သူမကို ကောငျးကောငျးခံစားရစပွေီး ပွီးခါနီးကရြငျ ပုံမှနျ သှငျးထုတျ လုပျပေးလိုကျပါ။
၆. ဘာဂြာ မှုတျပါ
သငျ့ရဲ့ နှုတျခမျးတှကေို ဘာဂြာမှုတျသလို ဝလုံးပုံ ဝိုငျးလိုကျပွီး သူမရဲ့ ပနျးဖူးလေးကို ပါးစပျထဲ ထညျ့လိုကျပါ။ ပွီးတော့ ဘာဂြာမှုတျသလို အသံလေးတှေ ပေးရငျး စုပျပေးပါ။
သငျ့ ဘောတှကေို အုပျကိုငျထားတာ ကွိုကျပါသလား?? အဲလိုပဲ လကျနှဈဖကျနဲ့ သူမပနျးပှငျ့ တဈခုလုံးကို အုပျကိုငျပွီး ပနျးဖူးလေးကို ဖိအားနညျးနညျ ပိုပေးလိုကျပါ။ ပွီးရငျ စညျးခကျြမှနျမှနျ နှိပျနယျပေးပါတော့။
ပနျးထုတျတာကို ပွောတာ မဟုတျပါဘူး။ မိနျးမတျောတျောမြားမြားက အာသာဖွဖြေောကျရငျ ရခြေိုးခနျးကို ပိုကွိုကျတာ သငျ သိပါသလား။ ရပေနျးတဈခုကို ကိုငျပွီး သူမရဲ့ အောကျပိုငျး ခန်ဓာကိုယျ တဈခုလုံးကို ဖနျြးပကျပေးနပေါ။ ပွီးတော့ သူမရဲ့ ပနျးဖူးလေးနားကို ကပျလိုကျ၊ ခှာလိုကျ လုပျပေးပါ။
၉. လိငျတံဖွငျ့ နှိပျနယျခွငျး
သငျတို့နှဈယောကျ မကျြနှာခွငျးဆိုငျ ဘေးစောငျး လှဲနပေါ။ ပွီးတော့ သငျ့ရဲ့ လိငျတံကို ကိုငျပွီး သူမရဲ့ ပနျးဖူးလေးကို လိငျတံထိပျနဲ့ နှိပျနယျပေးပါ။ သူမကို ကိုငျခိုငျးပွီး စိတျကွိုကျ နှိပျခိုငျးလို့လဲ ရပါတယျ။
၁၀. နှုတျခမျး ဝနျဆောငျမှု
သူမရဲ့ အတှငျးပိုငျး ပှငျ့ခပျြလှာတှကေို စုပျပေးခွငျးဟာ ပနျးဖူးလေး အရမျး sensitive ဖွဈလှနျးတဲ့ ကောငျမလေးတှကေို အဆငျပွစေပေါတယျ။ နာဗျကွော ၈ထောငျ ရှိတဲ့ ပနျးဖူးလေးကို တိုကျရိုကျထိတာ တခြို့ မိနျးမတှအေတှကျ မြားလှနျးပါတယျ။
၁၁. ကမ်ဘာနဲ့ ခြီရအောငျ
We-Vibe4Plus ဆိုတဲ့ Vibrator က U ပုံစံ ရှိပွီး အစှနျးတဈဖကျက ပနျးဖူးလေး၊ တဈဖကျက G Spot ကို ထိစပေါတယျ။ လိငျဆကျဆံစဉျမှာတောငျ ဝတျထားနိုငျပွီး Mobile App ကို သုံးရငျ ဟိုဘကျကမ်ဘာခွမျးကနပွေီးတောငျ သူမကို သငျ လှုံ့ဆျောပေးနိုငျပါသေးတယျ။
၁၂. Vibrator ရှညျမြား
ကွညျ့ရတာ ကွောကျဖို့ကောငျးပမေယျ့ လိငျဆကျဆံစဉျ Vibrator တဈခု ယူလာတာ သငျတို့ နှဈယောငျလုံးအတှကျ ပိုကောငျးစပေါတယျ။ သငျက ဆကျဆံစဉျ သငျ့တာဝနျကို ကအြေောငျ လုပျနိုငျပွီး သူမက ပနျးဖူးလေးကို စိတျကွိုကျ လှုံ့ဆှနိုငျပါတယျ။
သူမ ပနျးဖူးလေးကို ပူပွီး ယားလာစဖေို့ ထုတျထားတဲ့ ဆီတှေ ရှိပါတယျ။ Love Button arousal balm, Zestra, ON natural arousal oil for her တို့ဟာ နာမညျကွီးပါတယျ။ သုံးကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ ဖွညျးဖွညျးခွငျးစီ သုံးကွညျ့ပါ။ တခြို့မိနျးမတှကေ အရမျး Sensitive ဖွဈလှနျးပါတယျ။
Previous: အိပ်စက်ခြင်းနဲ့ ပြသနာများ
Next: အနေဝေးနေပေမယ့် သွေးအေးမသွားရအောင်